Real Madrid oo guul muhiim ah kaga gaartay Granada garoonkeeda Santiago Bernabeu, xilli Hazard uu shabaqa gaaray… +SAWIRRO – Gool FM
Real Madrid oo guul muhiim ah kaga gaartay Granada garoonkeeda Santiago Bernabeu, xilli Hazard uu shabaqa gaaray… +SAWIRRO
(Madrid) 05 Oct 2019. Real Madrid ayaa guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Granada garoonkeeda Santiago Bernabeu, kulan ka tirsanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-2.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-0 ay ku hogaamineysay Real Madrid oo ku ciyaareysay garoonkeeda Santiago Bernabeu.
Daqiiqadii 2-aad ee bilowga dheesha Karim Benzema ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Real Madrid waxayna ciyaarta noqotay 1-0, iyadoo uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis reer Weles ee Gareth Bale.
Dhamaadka qeybta hore ee dheesha gaar ahaan daqiiqadii 45-aad Eden Hazard ayaa ciyaarta ka dhigay 2-0, kaddib caawin uu ka helay saaxiibkiis Federico Valverde.
61 daqiiqo Luka Modric ayaa si toos ah u niyadjabiyay taageerayaasha kooxda Granada ee ku sugnaa garoonka Santiago Bernabeu, wuxuuna dheesha ka dhigay 3-0, waxaana goolkan ka caawiyay ciyaaryahan reer Belgian ee Eden Hazard.
69 Daqiiqo kooxda Granada ayaa heshay rigoore waxaana gool u badalay Domingos Duarte oo ciyaarta ka dhigay 3-1.
77 daqiiqo ciyaaryahanka lagu magacaabo Domingos Duarte ayaa rajo galiyay kooxdiisa Granada wuxuuna dheesha ka dhigay 3-2.
Laakiin daqiiqadii 90-aad James Rodriguez ayaa laabta u qaboojiyay taageerayaasha kooxda Real Madrid ee ku sugnaa garoonka Santiago Bernabeu wuxuuna dheesha ka dhigay 4-2.
Ugu dambeytii ciyaarta ayaa waxay ku dhamaatay 4-2 ay guusha ku raacday kooxda Real Madrid oo ku ciyaareysay garoonkeeda Santiago Bernabeu.
Liverpool oo guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Leicester City garoonka Anfield… +SAWIRRO
Shan Rikoodh muhiim ah oo laga diiwaan galiyay guushii dirqiga aheyd ay maanta Liverpool ka gaartay Leicester City